Ciise Masiix Waa Ayo? | War Wanaagsan
Ciise Masiix Waa Ayo?
1. Halkee iyo sidee bay nolosha Ciise u bilaabatay?
Tayooyinkee baa Ciise ka dhigay qof lala hadli karo oona loo dhowaan karo?—MATAYOS 11:29; MARKOS 10:13-16.
Si binuʼaadanka ka duwan Ciise samada buu ku noolaa si ruux oo kale intuunan adduunka ku dhalan. (Yooxanaa 8:23) Wuxuuna ahaa Ilaahay abuuristiisii ugu horreysay wuxuuna ka qaybqaatay abuurista waxyaalaha kale oo dhan. Yehowah si toos ah buu Ciise u abuuray sidaas daraaddeed baa si gudboon loo yiraahdaa inuu yahay wiilkiisa. (Matayos 16:16) Waxaana la yiraahdaa “Masiix” oo ka dhigan kan uu Ilaahay doortay inuu shuqul gaar ah sameeyo.—Akhri Maahmaahyadii 8: 22, 23, 30; Kolosay 1:15, 16.
2. Muxuu Ciise dhulka u yimid?
Ilaahay wiilkiisuu dhulka u soo diray. Wuxuu ku wareejiyay noloshuu ku lahaa samada uurka gabadh Yahuudiyad ah oo bikrad ahayd oo la oran jiray Maryan. Sidaas ay tahay Ciise aabbe binuʼaadmi ma lahayn. (Luukos 1:30-35) Ciise dunida wuxuu u yimid (1) inuu runta Ilaahay ku saabsan baro (2) inuu innaga tusaale inoo noqdo sidaan Ilaahay amarkiisa u yeelno markaan dhibaato la kulanno iyo (3) inuu noloshiisa kaamilka ah madaxfurasho inoogu bixiyo.—Akhri Matayos 20:28.
3. Maxaynu madaxfurasho ugu baahan nahay?
Madaxfurashada waxay tahay qiimaha la bixiyo in qof laga samatabbixiyo dhimasho. (Baxniintii 21:29, 30) Sidee baan u garanaynaa inay dhimasho iyo gabow ahayn Ilaahay qasdigiisii u horreeyay uu binuʼaadanka ula jeeday? Kitaabka Quduuska ah waxaa ku yaalla inuu Ilaahay u sheegay ninkii u horreeyay Aadan haddii uu dembi galo inuu dhiman doono. Hadduunan Aadan dembi gelin wuu noolaan lahaa. (Bilowgii 2:16, 17; 5:5) Siduu Kitaabka Quduuska ah sheegay dhimashada binuʼaadanka dunida ‘soo gashay’ Aadan baa sababay. Marka Aadan wuxuu u gudbiyay farcankiisa oo dhan dembi iyo ciqaabta dhimashada. Waxaan u baahan nahay madaxfurasho inaga badbaadisa xukunka dhimashada aynu ka dhaxalnay Aadan.—Akhri Rooma 5:12; 6:23.
Ayaa bixin kara madaxfurashada inaga badbaadisa dhimashada? Markaynu dhimanno waxaynu bixinaa ciqaabta dembigeenna oo keliya. Nin dembile ah oo kaamildaran awood u ma leh inuu bixiyo dembiyada dadka kale.—Akhri Sabuurradii 49:7-9.
4. Maxay ahayd sababtuu Ciise u dhintay?
Ciise innaga oo kale ma ahayn waayo kaamil buu ahaa. Muu u baahnayn inuu dembigiisa u dhinto waayo dembiba muu lahayn. Hase ahaatee Ciise wuxuu u dhintay dembiga dadka kale. Dadka qaarkood ayaa yiraahda Ilaahay weligiis ma oggolaanayo inay addoommadiisa quduuska ah dhintaan. Laakiinse Ciise wuxuu u dhintay inuu falo doonista Ilaahay. Markuu wiilkiisa Ciise soo diray Ilaahay wuxuu tusay inuu binuʼaadanka aad u jecel yahay. Ciisena wuxuu ina tusay inuu ina jecel yahay markuu aabbihiisa addeecay uuna noloshiisa dembigeenna u bixiyay.—Akhri Yooxanaa 3:16; Rooma 5:18, 19.
Daawo fiidiyowga Maxay Ahayd Sababtuu Ciise U Dhintay?
5. Imminka Ciise muxuu sameynayaa?
Markuu adduunka joogay Ciise dadkuu bogsiin jiray kuwii dhintay wuu soo sarakicin jiray wuxuuna badbaadin jiray dadka halis ku jira. Sidaas darteed buu ina tusay wuxuu u sameyn doono binuʼaadanka oo dhan ee amarka Ilaahay yeela. (Matayos 15:30, 31; Yooxanaa 5:28) Markuu Ciise dhintay Ilaahay dib buu u soo nooleeyay si ruux ahaan ah. (1 Butros 3:18) Ciise markaas buu gacanta midigta ah ee Ilaahay ku sugayay ilaa Yehowah ka dhigay Boqor quwad leh oo adduunka maammula. (Cibraaniyada 10:12, 13) Hadda Ciise samada Boqor buu yahay. Raacayaashiisana adduunka oo dhan bay ku faafiyaan warkan wanaagsan.—Akhri Daanyeel 7:13, 14; Matayos 24:14.
Mar dhow Ciise oo Boqor ah baa quwaddiisa isticmaali doonaa siduu u joojiyo dhibaato oo dhan iyo kuwa sababay. Kuwa Ciise rumaysta oona addeeca waxay ku raaxaysan doonaan janno ku taalla dhulka.—Akhri Sabuurradii 37: 9-11.
Wadaag Wadaag Ciise Masiix Waa Ayo?